दिपाश्रीको सिउँदोमा सिन्दुर, तर कसको नामको ? « Ramailo छ
दिपाश्रीको सिउँदोमा सिन्दुर, तर कसको नामको ?
अभिनेत्री तथा निर्देशक दिपाश्री निरौला अविवाहित छन् । तर उनको सिउँदोमा भने सिन्दुर देखिएको छ । सिउँदोमा सिन्दुर लगाएका तस्बिरहरु रमाईलो छ डटकमलाई प्राप्त भएका छन् । आखिर दिपाश्रीले कसको नामको सिन्दुर लगाइन् होला त ?
धेरै नसोच्नुस्, दिपाश्रीले अभिनेता हरिवंश आचार्यको नाममा सिउँदोमा सिन्दुर लगाएकी हुन् । तर वास्तविक जीवनमा होइन्, पर्दाको जीवनमा मात्रै । फिल्म ‘सत्रुगते’ मा दिपाश्री अभिनेता आचार्यको श्रीमतीको भूमिकामा प्रस्तुत भएकी छिन् । मदनकृष्ण श्रेष्ठको अपोजिटका कलाकार बसुन्धरा भूषाल छिन् । फिल्मको यतिबेला राजधानीमा छायाँकन चल्दैछ ।
मह सञ्चार र कलाकार किरण केसीको प्रस्तुती रहेको ‘सत्रुगते’ मा मह जोडीदेखि दिपक, दिपा, प्रियंका कार्की, पल शाह, आँचल शर्मा लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहेको छ । केही सातामा फिल्मको छायाँकन सकिनेछ । जम्बो कलाकारको टोली रहेको फिल्म चैत ९ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउँदैछ । फिल्मलाई प्रदीप भट्टाईले निर्देशन गर्दैछन् ।